इन्टरनेट इतिहास: यसरि भयो “वल्डवाइड वेब”को शुरुवात – Idea Khabar
आइडिया खबर२०७८ बैशाख २८, मंगलवार १३:००
के तपाईँलाई इन्टरनेटको सबैभन्दा पहिलो वेबपेज हेर्ने कुराले उत्साहित बनाउँछ? बनाउँछ भने थाहा पाइरहनुहोस्, त्यो रमाइलो खालको अनुभव हुनसक्छ। त्यो वेब पेज रङ्गिन थिएन, त्यसमा तस्वीर वा भिडिओ थिएन, त्यसमा खालि अक्षर र लिङ्क थियो। अनि थिए केही झुक्किनेखालका मेनु।
तर त्यहि सानो प्रयासबाट आज डब्ल्युडब्ल्युडब्ल्युले ठूलो फड्को मारेको छ। विकिपिडिया, फेसबुक, गुगल र अनगिन्ती अन्य इन्टरनेटका पानाहरू जसलाई विश्वभरका करौडौं मानिसहरूले दैनिक हेर्ने गर्दछन् ।
डब्ल्युडब्ल्युडब्ल्यु वा वर्ल्ड वाइड वेबको जन्म सन् १९८९ मार्च १२ वा नेपाली पात्रो अनुसार विसं २०४५ फागुन २९ गते पारमाणविक अध्ययनका लागि युरोपेली संस्था, सर्न,मा भएको थियो। जेनेभामा मुख्यालय भएको भएपनि सो संस्थामा १०० भन्दा बढी देशमा रहेका १० हजारजना भन्दा बढी वैज्ञानिकहरू जोडिएका थिए। उनीहरूका लागि भरपर्दो सञ्चार माध्यमको आवश्यकता थियो।
यसको जन्मदाता थिए बेलायती भौतिकशास्त्री तथा इञ्जिनियर टिम बर्नर्स-ली जसले ती सबै वैज्ञानिकहरूबिच सुरक्षितरूपमा आफ्नो अध्ययनका बारेमा जानकारी आदानप्रदान गर्न ‘सूचना व्यवस्थापन प्रणाली’को प्रस्ताव गरेका थिए। बर्नर्स-लीका तत्कालिन हाकिम मार्क सेन्डलले त्यो प्रस्तावलाई ‘अस्पष्ट तर चाखलाग्दो’ भनेका थिए।
उनले वेब शुरु गरेको साधारण विचार थियो – सूचना व्यवस्थापन: एक प्रस्ताव जुन यसप्रकार छः-
बेलाको प्रविधि कस्तो थियो त? त्यो बेला न विण्डोज थियो न गुगल क्रोम। व्यक्तिगत कम्प्युटर औंलामा गन्न सकिन्थ्यो, र प्रविधि बजार सारै नै प्राविधिक र हेर्दा दिक्कलाग्दो थियो। इन्टरनेटको एकमात्र प्रयोग भनेको केही इमेल र फाइल पठाउने थियो।
अहिले फाइभजिको जमानामा हामी द्रुत गतिको इन्टरनेट चलाउछौँ र केही सेकेण्ड इन्टरनेट चलेन भने दिक्क मान्छौँ तर त्यो बेला इन्टरनेट चलाउन दिक्दारी व्यवस्थापन गर्न जान्नुपर्दथ्यो।
“यदि तपाईँले वेबपेज हेर्नु गज्जब हो भन्ठान्नु भएको छ भने म विश्वस्त छु तपाईँले कहिल्यै वेबपेज बनाउनु भएको छैन,” बर्नर्स-लीले सन् १९९८ मा भनेका थिए।
सिइआरएनले पहिलो वेबसाइटलाई फेरी इन्टरनेटमा उपलब्ध गराउने परियोजना शुरू गरेको छ, जुन यहाँ उपलब्ध छ।
तर यदि पहिलो वेबपेज ठ्याक्कै कस्तो थियो भनेर हेर्न चाहानेका लागि त्यो यहाँ उपलब्ध छ।